Warning: Missing argument 1 for pageTitle(), called in /home/indra/public_html/wp-content/themes/nb/header.php on line 35 and defined in /home/indra/public_html/wp-content/themes/nb/inc/functions/sdfunctions.php on line 322
Notice: Undefined variable: echo in /home/indra/public_html/wp-content/themes/nb/inc/functions/sdfunctions.php on line 362
नेपाल र विश्व : जलवायु परिवर्तनका यी दुष्परिणाम - नेपाल र विश्व : जलवायु परिवर्तनका यी दुष्परिणाम
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/indra/public_html/wp-content/themes/nb/header.php on line 602
नेपाल र विश्व : जलवायु परिवर्तनका यी दुष्परिणाम
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २6 पुष, 08:00:06 PM
नेपालले जलबायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी ५५ अर्ब रुपैयाँ क्षति भोगिरहेको छ
विश्व तापक्रममा डेढ डिग्री सेल्सियस (२.७ डिग्री फरेनहाईट) बढ्यो भनेपनि सोचेभन्दा ठूलो उथलपुथल र क्षति उत्पन्न हुन्छ भनी सन् २०१८ अक्टुबरको सुरूमा दक्षिण कोरियाको इन्चेयनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यदल (IPCC) द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको दशकमा पृथ्वीको तापक्रममा १ डिग्रीमात्र बढ्दा पनि जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा आँधिवेहरी, डडेँलो, खडेरी, तातोहावा, बाढीपैहोजस्ता आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रकोप अति नै बढेर आए भने २ डिग्री सेल्सियस बढ्यो भने के मात्र नहोला !
०७३ को जेठमा भारतमा आजसम्मको सबभन्दा बढी गर्मी भयो ५१ डिग्री सेल्सियस । भारतीयहरू लू का साथै डिहाइड्रेसनले पनि मरे । भारतमा सिंचाई वा खानेपानीको समस्या क्रमशः बिकराल बनिरहेको छ । ७२ प्रतिशत भूमिगत जलको भण्डार भारतीयहरूले खर्च गरिसके । त्यसको असर नेपालको तराई र चुरे वा भित्री मधेशसम्म नै देखापरेको छ ।
विश्वभरि नै हावापानीमा परिवर्तन आएको छ, तापक्रम बढिरहेको छ । ५ हजार फिटभन्दा माथि पर्ने नेपालको हिमालय क्षेत्र २३ प्रतिशत छ । कुल हिमालय क्षेत्रमा विश्वको औसत तापक्रम बृद्धिभन्दा ५ गुणा बढी दरले बढिरहेको वैज्ञानिकहरूको अध्ययन प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट हिमालयको सेरोफेरोका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका ४० करोड जनता प्रत्यक्ष असर भोग्दैछन् । सन् २००७ प्रकाशित एउटा विदेशी ‘तथ्याङ्क’ ले त सन् २०३५ सम्ममा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको हिऊँ पग्लिसक्छ भनेर तहल्कै मच्चाएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ६ हजार अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको भनिने २०१८ को उक्त इन्चेयन प्रतिवेदनमा अनेकौं लोमहर्षक चित्रण तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा युद्धस्तरको कटौती आजैदेखि नथाल्ने हो भने आगामी दुईदशकभित्रै पृथ्वीको तापक्रम डेढ डिग्री बढ्ने निश्चित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्वब्यापी तापक्रमलाई डेढ डिग्रीबाट तल झार्ने हो भने जनस्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जनजीवनमा उल्लेखनिय प्रभाव देखिन्छ भनी वैज्ञानिकहरू ठोकुवा गर्छन् ।
इन्चेयन प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अहिलेसम्मको सबभन्दा आधिकारिक तथा वैज्ञानिक प्रतिवेदन हो, जसलाई नेपालदेखि अमेरिकासम्मका १९५ मुलुकले स्वीकार गरेका छन् । मूल प्रतिवेदनबाट ३४ पृष्ठको ‘नीति निर्माताहरूका लागि सारांश’ बनाइएको छ । २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हरेक मुलुकले विश्वको तापक्रम २ डिग्री (३.६ डिग्री फा.) भन्दा तल झार्ने भन्ने निर्णय लिईयो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पेरिस निर्णयबाट पछिहट्ने घोषणा गरेको छ ।
२०७० को चैत दोस्रो सातामा विश्वका बरिष्ठ बैज्ञानिक तथा सरकारी अधिकारीहरू मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने खतरासम्बन्धी एउटा रिपोर्टलाई अन्तिमरुप दिन जापानमा भेला भएका थिए । सो रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार आगामी शताब्दीमा मौसम परिवर्तनका खतरालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र, खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र विश्वब्यापी सुरक्षामा ठूलै असर पर्नजानेछ । कतिपय नकारात्मक प्रभाव भने रोक्नै नसकिने खालका हुनेछन् ।
विदेशतिर मौसम परिवर्तन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने गति चेतावनीपूर्ण हुँदैछ । ०७३ को जेठमा भारतमा आजसम्मको सबभन्दा बढी गर्मी भयो ५१ डिग्री सेल्सियस । भारतीयहरू लू का साथै डिहाइड्रेसनले पनि मरे । भारतमा सिंचाई वा खानेपानीको समस्या क्रमशः बिकराल बनिरहेको छ । ७२ प्रतिशत भूमिगत जलको भण्डार भारतीयहरूले खर्च गरिसके । त्यसको असर नेपालको तराई र चुरे वा भित्री मधेशसम्म नै देखापरेको छ ।
३७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको तराईमा सन् २०१४ मा आएर २० प्रतिशतभन्दा केही बढी भूभागमा मात्र वन क्षेत्र खुम्चियो । अहिले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ निजगढ फास्टट्राक बनाउने नाममा २४ लाख रुख ढाल्ने योजना देखिँदै छ । इलामदेखि डडेँलधूरासम्म मध्यपहाडमा आज पानीका मूल धेरै सुकिसके, चाहे त्यो भूकम्पले गर्दा होस्, चाहे सडक खन्न डोजर चलाएर धर्ती खल्बल्याएका कारणले होस् । वन फडानी, पहिरो चलाउने कारकहरू पनि कम दोषी छैनन् ।
०७३ मा फ्रान्सलगायत युरोपका कतिपय मुलुकमा ३० यताको सबभन्दा ठूलो बाढी आयो । २०७० सालको हिँउदमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाका जनताले उत्तरी ध्रुबबाट आएको अतिचिसो स्याँठको प्रकोपमात्र भोगेनन् ४० वर्षयताको सबभन्दा ठूलो हिमपातको सामना गरे । धेरैले ज्यान गुमाए । जापानमा सोही वर्ष भएको हिमपात २५ वर्षयताकै सबभन्दा ठूलो थियो । हावापानी परिवर्तन र पृथ्वी तात्दैजाने क्रमले गर्दा संसारभरि नै औलोज्वरो बढ्ने र फैलने खतरा देखापर्दैछ भनी सन् २०१४ फेब्रुवरीमा गरिएको एक अध्ययनमा देखिन्छ । २०१८ मा जापान तथा युरोपमा भएको अभूतपूर्व गर्मीबाट धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपालले भोगिरहेको परिणाम
हिमालयको हिऊँमा कार्बनका कण भेटिन थालेका छन् । हिमालका टुप्पामा कालो बादल (ब्राउन क्लाउड) मडारिन थालेको कारण के हो ? भारत र चीनले गरेको औद्योगिक विकासको असरका रुप हुन् यी ! वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्म नेपालको वन फडानी अचाक्ली भयो । वन क्षेत्र ६ लाख ४५ हजार ३ सय हेक्टरमा झ¥यो । २०५० सालमा आएर वन क्षेत्र थप १ लाख हेक्टर मासियो । ३७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको तराईमा सन् २०१४ मा आएर २० प्रतिशतभन्दा केही बढी भूभागमा मात्र वन क्षेत्र खुम्चियो । अहिले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ निजगढ फास्टट्राक बनाउने नाममा २४ लाख रुख ढाल्ने योजना देखिँदै छ । इलामदेखि डडेँलधूरासम्म मध्यपहाडमा आज पानीका मूल धेरै सुकिसके, चाहे त्यो भूकम्पले गर्दा होस्, चाहे सडक खन्न डोजर चलाएर धर्ती खल्बल्याएका कारणले होस् । वन फडानी, पहिरो चलाउने कारकहरू पनि कम दोषी छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनका विश्वब्यापी असर नेपालमा के कसरी परेको छ भन्ने प्रश्नका लागि यी परिघटना नियालेर ध्यान दिऔँ त !
तराईमा गहुँ र धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्यो भने पहाडमा सुधार देखियो । मुस्ताङ्मा पनि धान फल्नथाल्यो । धान पाकेपछि पानी पर्ने गर्न थाल्यो । हिमाली भेगमा छिटै बाली पाक्न थाले । मुस्ताङ्–मनाङ्मा काठमाडौँका धेरैजसो तरकारी फल्नथाले । २०७० देखि २०७५ सालसम्म मंसिर पुसको अन्तिमतिर हुने जाडो कात्तिकको मध्यतिरै अनुभव भयो । ओखलढुङ्गा सल्लेरीको फाप्लु बागबानीमा पुस महिनामै स्याउ फल्यो । मंसिरदेखि नै चिचिला लाग्नथालेको लोचेलिङ् जातको स्याउको फल्ने सिजन बदलिएको पाँच वर्ष भएको स्थानीय विज्ञले बताए ।
अर्घाखाँची पणेनाको सिम्ले आदि तथा सिन्धुलीको रतनचुरा, बागेश्वर, जलकन्या, तीनकन्या, बितीजोर, दुम्जा, मझुवा आदि गाबिसमा दशैंमै सुन्तला पाक्नथाले । यो अवस्था हरेक वर्ष नै हुनथालेको छ । धादिङ् र धनकुटामा तिहारमा बेच्ने गरिएको पूmल खेती तिहारभन्दा धेरै अगाडि नै फुलिदिएर समयमा बेच्न नपाई बारीमै सुके । उदयपुर जिल्लाको रचने, नाभेटार, जीरे, टाट्ने, द्वारेभञ्ज्याङ् लगायतका गाउँमा साविक चैत लाग्दा फुल्नेगरेको गुराँस २०७० सालको माघमै फुल्यो । हिउँ पग्लिने सिजन चैत्र ४, २०७० मा हुम्लामा हिमपात भएको थियो ।
यार्चागुम्बाको उत्पादन ह«ासोन्मुख छ, यस्तै हुँदैगयो भने बिऊ पनि मासिएला भन्ने डर बढेको छ । डडेलधुरामा काफल चाँडै पाक्नथाल्यो । काठमाडांैको दरबारमार्ग र रत्नपार्कको शिरिष ढिलो फुल्यो । ‘गुँरासको राजधानी’ भनिने तेह«थुृम वसन्तपुरको मिल्के, तीनजुरे, जलजले क्षेत्रमा सिजनभन्दा पहिले नै गुँरास पूmल्न थाल्यो ।
तराईमा मात्र देखिने सर्प पहाडतिर उक्लिएछन्, पहाडमा पनि देखिनथाले । ‘किङ् कोब्रा’ जातको तराईमा मात्र पाइने अति विषालु सर्प काठमाडौँमा पाइएछ । २०६९ सालमा फर्पिङ्मा करेँत साप भेटिएको जानकारी पाइयो । कर्णालीमा पनि लामखुट्टे लाग्न थाल्यो । चारहजार फिटमाथिको अक्षांशमा लाग्दैनन् भनिन्थ्यो, आज पाँचहजार फिटमा पनि झुल चाहिने हुनथाल्यो । सगरमाथाको आधार शिबिरमा झिँगा देखिन थाले । त्यहाँ सामान्य स्वेटरले पनि काम चल्ने भएछ ।
हिमचितुवा र डाँफे घटेको अनुमान छ । चराले चाँडै बच्चा कोरल्न थालेको छ । भोटे कुकुरका भुत्ला झर्न थालेका छन्, ऊ आफ्नै थलोमा जिब्रो निकालेर स्याँस्याँ गर्न थालेको छ । २०७० माघ अन्त्यतिर रुपन्देही र कपिलबस्तु वरिपरिका ९ ठाउँमा चरा गणकहरूले पत्ता लगाएअनुसार नदी किनारमा सिमसारको कमी, घाँस मासिने क्रम र विषादीको बढ्दो प्रयोगले पर्यावरण तथा जैविक विनास तथा असन्तुलन बढेर चराको संख्या २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको पाइयो ।
फेवाताल र रारातालको पानी घट्दो झुकावमा रहेको छ । फेवातालको पिँधमा माटोको सतह बढेको र पुरिने क्रम निरन्तर भइरहेको छ । राजधानीलगायत देशका सबै भागमा पानीका भूमिगत स्रोत सुक्दै गएकोले सयौँ वर्षदेखिका हिटी–धारा या तिर्तिरे भए वा सुके । ०७२ बैशाखको भुईचालोले गर्दा कुवा र इनारहरूको त्यहि हालत छ । सेतो हिँउले ढाकिने गरेका हिमशिखरहरूमा काला चट्टानहरू बढ्तै देखिन थाले । हिमपात अत्यन्त कम हुँदै काला चट्टान बढेर हेर्दाहेर्दै बेग्लै देखिन थालेपछि महालंगुर हिमश्रृङ्खलाका सगरमाथा, ह्लोत्से, पुमोरी, नुप्त्से आदि पर्वतहरू खुम्चिँदै गएका छन् ।
हिमतालहरू क्रमशः पग्लिँदैछन्, गोराक्सेप, लोबुचे, थुक्ला, गोक्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू चिन्तित हुनथालेका छन् । मौसमविद् डा.एम्.पी भट्ट लेख्छन,“विश्वब्यापी उष्णताका कारण करिब ६७ प्रतिशत हिमनदीहरूमा ह्रास आईसकेको, तथा झन्डै दुई दशकको पंक्तिकारकै अनुसन्धानको क्रममा केन्द्रीय हिमनदीहरूमा एकसय मिटरभन्दा बढी ह्रास भएको पाइएको छ ।…..विश्व प्रकृति कोष नेपाल (२००५) को एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३२५२ हिमनदीहरू २३२३ हिमतालहरू छन्, जसमध्ये २६ वटा हिमतालहरू ठूलो खतरा निम्त्याउने खालका छन् (इसिमोड र युएन्इपी २००१) ।…..अहिलेसम्म नेपालभित्र पाँचवटा हिमताल विष्फोटनका घटनाहरू भइसकेका छन् । खम्बु क्षेत्रमा मात्रै गएका तीनदशकभित्र दुईवटा हिमताल विष्फोटनका घटना भएका थिए” (कान्तिपुर २०७०–३–३१–२) ।
पृथ्वीको गतिको यकिन हिसाब सेकेन्डमा बचत हुँदैजाँदा सयौँ वर्षमा एकपटक यसरी मिलान गर्नुपर्ने आवश्यक देख्छन् ज्योतिष र खगोलविद्हरू । पात्रो मिलान नगर्दा पनि महिना र मौसमको तादाम्य नमिले आप्राकृतिक रुप देखापर्ने गरेका छन् । अन्य मुलुकले यस्तो पात्रो मिलान पहिले नै गरिसकेका छन् ।
कोशी नदी बेंसी (क्षेत्र) मा बाढी–पहिरो आदि अत्यधिक हुनथालेको र कृषिलगायत विकासका पूर्वाधार तथा जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकारले कोशी नदी बेँसीमा पर्ने आठ उपबेँसीहरूमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव र परिणामको अध्ययन गर्न एउटा पाइलट प्रोजेक्ट नै सुरू ग¥यो ।
२०६८ (सन् २०११) मा उच्च हिमाली भेगमा कात्तिकमै हिँउ परेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएको थियो । सन् २०१२ मा पनि यस्तै स्थिति दोहोरियो । यो क्रम २०७० साल बैशाखमा पनि पूर्वको ताप्लेजुङ् र पश्चिमको मुक्तिनाथ क्षेत्र (मुस्ताङ्) लगायतका क्षेत्रमा हिउँ परेर त्यहाँका जनतालाई अप्ठ्यारोमा पा¥यो । मंसिरमा हिउँ परेर फागुनमा सकिने क्रमभङ्ग भई विगत ५ वर्षमा चैत–बैशाखमा पनि हिउँ पर्न थालेको छ । मुस्ताङ्मा २०७० बैशाखमा पनि हिउँ परेपछि स्याउको कोपिला र औवा बालीलाई असर गरेको थियो ।
हरेक वर्ष चट्याङ्को प्रकोप बढिरहेको छ । यसको प्रहारबाट मृत्यु वा हताहत हुने मानिस र जनावरको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । मानिसको धेरै मृत्यु हुने प्राकृतिक प्रकोपमध्ये चट्याङ् पनि एउटा भएको छ । गृहमन्त्रालय भन्छ, २०७० को बैशाखदेखि चैत्र मध्यसम्ममा एकसय १० मानिस र पाँचसयभन्दा बढी जनावरले चट््याङ्को झट्काबाट ज्यान गुमाएका थिए भने १९७ जना मानिस घाइते भएका थिए । सन् १९७१ देखि २०१० को चार दशकको अवधिमा नेपालमा हुरीबतास र चट्याङ्बाट एकहजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । २०७५ सम्ममा प्राकृतिक प्रकोपमा चट्याङ्ग पाचौँ खतरा हुनआएको छ । मौसम उथलपुथलको परिणाम र प्रभाव यसमा पनि देखिन थालेको छ ।
मध्यफागुनको तापक्रम माघको शुरूमै अनुभव हुनथाल्यो । मंसिर नसकिँदै तराईमा शीतलहर चल्नथाल्यो, पुसको १/२ गते त शीतलहरले मान्छे मर्न सुरू भयो । २०६९ को तथ्याङ्कअनुसार पुस अन्त्यसम्ममा शीतलहरबाट मर्नेको संख्या ७० माथि पुगेको थियो । मौसमविद्हरूले बताएका छन्, सन् १९५४ देखि २००२ सम्मको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा मौसम उथलपुथलबाट आएको बाढी–पहिरोका कारण १५ लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । तिनीहरू या मरे या त तिनीहरूको घर–बास उठिबास भयो ।
वातावरण, हावापानी र मौसमको क्षेत्रमा काम गर्ने भनी १ हजार सातसय भन्दा बढी, सामुदायिक तथा ग्रामिण विकासका लागि २५ हजार ४०३, स्वास्थ्य सेवा ८७५ संस्थाहरू दर्ता भएको देखिन्छन् । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई.एन्.जी.ओ.) २४७ वटा कार्यरत देखिन्छ । यिनीहरू कहाँ के गरिरहेका छन्, सरकार इन्तु न चिन्तु छ ।
२०६७ सालमा पात्रो मिलानका लागि चैत महिना हटाएर एघार महिनाको वर्ष बनाउने सम्भावना थियो । पृथ्वीको गतिको यकिन हिसाब सेकेन्डमा बचत हुँदैजाँदा सयौँ वर्षमा एकपटक यसरी मिलान गर्नुपर्ने आवश्यक देख्छन् ज्योतिष र खगोलविद्हरू । पात्रो मिलान नगर्दा पनि महिना र मौसमको तादाम्य नमिले आप्राकृतिक रुप देखापर्ने गरेका छन् । अन्य मुलुकले यस्तो पात्रो मिलान पहिले नै गरिसकेका छन् ।
पहिले काठमाडौंका मानिसहरू हिँउदमा घाम ताप्न र रमाइलो मौसमका कारण पहाडबाट तराई झर्ने गर्थे । आजकाल तराईका मानिसहरू हिँउदमा शीतलहरका कारणले जाडो छल्न काठमाडौं आउन थालेका छन् । मानिसमा क्यान्सर, मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, चर्मरोगजस्ता रोग अस्वाभाविक गतिमा बढ्दैगए । भान्साकोठामा मुसा र साङ्ला बढ्नथाले ।
नेपालमा सन् २०१७ मा गैरसरकारी संस्थाको कुल संख्या ४६ हजार २ सय ३५ हुँदा वातावरण, हावापानी र मौसमको क्षेत्रमा काम गर्ने भनी १ हजार सातसय भन्दा बढी, सामुदायिक तथा ग्रामिण विकासका लागि २५ हजार ४०३, स्वास्थ्य सेवा ८७५ संस्थाहरू दर्ता भएको देखिन्छन् । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई.एन्.जी.ओ.) २४७ वटा कार्यरत देखिन्छ । यिनीहरू कहाँ के गरिरहेका छन्, सरकार इन्तु न चिन्तु छ ।
२०७१ बैशाखको मध्यमा राजधानीमा सम्पन्न भएको ६२ देशका ४०० जलवायृु विज्ञहरूको एउटा सम्मेलनमा हावापानी परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कोषकी अध्यक्ष क्रिस्टियाना फिगरेसले भनिन् मौसम परिवर्तनका कारण उत्पन्न दुष्परिणामबाट नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत क्षति भोगिरहेको छ । यसको अर्थ बि.सं. २०७३ को मूल्यमा नेपालले जलबायु परिवर्तनका दुष्परिणामबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वर्षेनी ५५ अर्ब रुपैयाँ क्षति भोगिरहेको छ । सोही सम्मेलनमा विज्ञहरूले बताए, ग्रीनहाउसबाट उत्सर्जन भएको ग्याँसले वायुमण्डलमा आठलाख वर्ष यताकै सबभन्दा उच्च बिन्दुको परिमाण थुपारेको छ, जसले गर्दा वायुमण्डलमाथि रहेको ओ–जोन तह पातलिएर सूर्यको किरण छानेर पृथ्वीमा पठाउने प्रक्रियामा खराबी बढिरहेको हुँदा क्यान्सर लगायतका घातक बिमारहरू बढिरहेका छन् ।
पृथ्वीबाट कार्बन डाइअक्साइडको अत्याधिक उत्सर्जन (Carbon emission) नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र मौसम उथलपुथल हुने मूख्यकारण हो । तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट प्रतिवर्ष ०.३१६२ टन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ भने अमेरिका एक्लैले प्रतिवर्ष १४८८.४७ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणाम, नेपालले नगरेको गल्तीको यातना वा सँजायका रुपमा भोग्नु परिरहेको छ ।
२०७५, २6 पुष, 08:00:06 PM
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/indra/public_html/wp-includes/functions.php on line 4115
‘मधेश बिखण्डन’ वितण्डाको नालीबेली